Hotely misy angovo avy amin'ny masoandro | Fanavaozana maintso
Adriana | | Mitsitsy angovo, Angovo Solar Photovoltaic
Sehatra ara-toekarena lehibe ny indostrian'ny hotely satria misy hotely an'arivony amin'ny habe rehetra eto an-tany. Mandany be ireo orinasa ireo herinaratra sy angovo noho ny serivisy natolotry ny mpitsidika azy ireo.
Fa ankehitriny ny fironana dia mitsitsia angovo ary mba ho ekolojika bebe kokoa, izany no antony anaovan'ny hotely maro manerantany ny tranony, ny rafitra fanafanana sy ny fampangatsiahana, ankoatry ny hetsika hafa, hahatonga azy ireo ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana.
Ohatra roa tokony horaisina: ny hotely Crowne Plaza any Danemark dia nanisy takela-masoandro tamin'ny fasadany izay manome ampahany lehibe amin'ny heriny. Ho fanampin'ny famolavolana sy teknolojia maharitra angovo mahatonga ny trano hahomby kokoa, mamela ny fampiasana angovo tsara kokoa.
Ity trano fandraisam-bahiny ity dia mamonjy manodidina ny 50% amin'ny fihinananan'ny orinasa mitovy amin'izany amin'ny rafitra angovo mahazatra.
Tranga iray hafa tena manandanja ihany koa ny hotely fandraisam-bahiny Power Valley Jingjiang International any Shina. Ity trano fandraisam-bahiny misy kintana dimy ity dia misy efitrano 291 sy fotodrafitrasa fanampiny maro toy ny trano fisakafoanana sy efitrano fisakafoanana.
Ity trano fandraisam-bahiny ity dia mamokatra 10% ny angovo ampiasainy amin'ny angovo avy amin'ny masoandro avy amin'ny taona 3800 modules photovoltaic. Seho iray manamarika iray hafa ihany koa ny fananana rafitra hamerenana ny angovo azo avy amin'ny rano maloto ary hanova azy io ho hafanana, rano mangatsiaka ary rano mafana.
Hitan'ny hotely ny tombotsoan'ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny endrika tontolo iainana ary ny angovo maharitra hamonjy angovo sy vola be.
Izy io koa dia fomba iray hamaliana ny fitomboan'ny filan'ny mpanjifa izay mitaky fitantanana tsara ny tontolo iainana ataon'ny orinasa.
Azo antoka fa trano fandraisam-bahiny betsaka eto amin'izao tontolo izao no hanahafana ireo fihetsika ireo satria manandanja tokoa amin'ny antoko rehetra.
Mitsitsia angovo sy mamokatra angovo azo havaozina Izy io dia fanoloran-tena ho an'ny rehetra, fa ny orinasa lehibe sy ny orinasa dia manana adidy lehibe kokoa satria izy ireo no mandany betsaka indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Hotely misy angovo avy amin'ny masoandro